India: Chirwere Chechipiri Chichigadziriswa Chaiva Chipiri Chekukohwa, Vatariri Vanoparadza Zvirimwa | India News - TELES RELAY
HOME » pasi rose India: Genetically Modified Brinjal Yechipiri Kukohwa, Vakuru Vanoparadza Zvirimwa | India News
NEW DELHI: Rimwe Vhiki Mushure mekugamuchira Chirongwa cheGeneti Modified Brinjal (GM) Kurima Kwekurima kuFatehabad Farm muHaryana, State Horticultural Department Svondo rakaparadza zvipembenene zvisingagumi zvemugadziri kubva pahafu yefreage purazi kuRatia Block muFatehabad District uye yakarongedza tsvakurudzo yakajeka inobva mubhuku remurimi.
"GM Brinjal yemiti yakasimudzwa uye yakavigwa mufurazi imwe chete nhasi. Hurumende inonyanya kuipa pamusoro peizvi (GM Brinjal zvisiri pamutemo) uye iri kutora matanho ose anokwanisa. Zvimwe zviito (zvinoenderana nemigumisiro yeongororo) zvichitevera, "akadaro Arjun Singh Saini, maneja mukuru (horticulture) wehurumende yeHaryana.
Vakabvunzwa kana pane nyaya dzeimwe kushandiswa kwezvirimwa zveG GM Brinjal muhurumende, Saini akaudza TOI kuti dhipatimendi racho rave rakatora mashoko kubva kune rimwe nerimwe remahofisi aro emahofisi uye kuti 'kwakanga kusina kana' '.
Kunyangwe kuongororwa kwekutanga kunotungamirirwa neHurumende kusingabvumirwi kushandiswa kwekurima mune dzimwe nharaunda, kunyatsotsvakurudza kuchaenda kune pasi pekugovera mbeu, zvichifunga kuti iyi yakanga isiri iyo. gore rokutanga muRatia, takasarudza GM GMB. Yaiva chibereko chake chechipiri chezvipembenene zvakasiyana-siyana zvepurazi.
Simba hurumende mamiriro ezvinhu akadzidza kuti kuenderera mberi kuongororwa kuchaenda mberi kweHaryana kuongorora kana mhembere ichangobva kuitwa pamusoro mashanga anopisa pedyo Punjab vaitova zviitiko zvinoberekeswa dzakachinjwa Brinjal akaparadza somugumisiro pamusoro Kuziviswa zvisiri pamutemo chirimwa mushumo akadura kana vaiva zvatinosiita purogiramu varimi yokururamisa minda yavo pamberi inotevera yokudyara nenguva.
Akabvunzwa pamusoro pehuwandu hwekutsvakurudza, Saini akati zvimwe zviyero, zvakadai sekutsvakurudza / FIR FIR, nezvimwe, zvinotorwa nedhipatimendi rezvematongerwo enyika, maererano nemitemo yemutemo 1986 pamusoro pekuchengetedzwa kwenharaunda (EP).
Zvinyorwa 15 16 uye 17 zveMutemo weEurope zvine zvigaro kuranga kusatenderwa zvakadai sekurima zvipenyu zvakagadziriswa (GMOs), kunze kwemarudzi akasiyana Bt Cotton inorambidzwa muIndia.
"Murimi, Jeevan Saini, haafaniri kurangwa, angave akanyengerwa mukurima mbeu idzi dzisiri pamutemo. Asi, zvinofanira ndanyarara hangu zvakazara rokuputsa ake yakamira chirimwa, "akadaro Rajinder Chaudhary, akarega basa purofesa paUniversity Mr. Rohtak, iyo yakatanga pachena kusiri pamutemo uyu panze.
Chaudhary, inosanganiswa ne "Kudarti Kheti Abhiyan" muHaryana, vakaudza TOI kuti masangano ekutsvaga aifanira kutora mbeu yose yeGerm Brinjal. "Uyu waiva gore rechipiri mushure mokunge murimyi uyu akadyara mbeu dzakadaro. Panofanira kunge kune vamwe vanhu vanobatanidzwa uye panofanira kuva nehomwe yembeu yakadaro. "
Mutemo weEurope unopa makore mashanu kusvika mujeri kana mubhadharo kusvika ku1 Rs. Lakh, kana maviri, uye kana kukanganisa kana kupesana kuchienderera mberi, neine imwezve yakanaka yepamusoro kusvika ku 5 000 Rs kwezuva rimwe nerimwe apo kukanganisa kana kupesana kunopfuurira mushure mekutongwa kwekutanga kukanganisa kana kusapera.